I-Google ne-AMEX Ikhiqiza Amavidiyo Amahhala Amabhizinisi Amancane | Martech Zone
NgeSonto, uJanuwari 2, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ungumnikazi webhizinisi elincane? Ucwaningo lwe-Google lukhombisa ukuthi ividiyo eku-inthanethi ingakhuphula ukuthengiswa okusesitolo ngo-6%, futhi ikhulise ukukhumbula umkhiqizo ngama-50% amaningi. IGoogle neAmerican Express bayabambisana futhi bakhiqize amavidiyo amabhizinisi amancane ukukhuthaza amabhizinisi abo amancane ngokusebenzisa ividiyo.
Indaba Yami Yebhizinisi iyithuluzi lamahhala lamabhizinisi amancane avela kuGoogle neAmerican Express. Ithuluzi linikeza umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo wabaninimabhizinisi abancane ukudala ividiyo yamahhala nekhwalithi yobungcweti emayelana namabhizinisi abo. Amavidiyo enziwe ngethuluzi lokuhlela Indaba Yami Yebhizinisi azogcinwa kubanikazi bamabhizinisi amancane 'ama-Akhawunti ka-Youtube futhi angasetshenziswa ngamabhizinisi njengokumaketha noma ukukhangisa amafa ngokuzayo.
Okuhle kunakho konke ukuthi amavidiyo amahhala futhi anakwa. Amavidiyo amaningi engiwabonile kule nsizakalo abukwe ama-20,000 kuya ku-500,000. Amavidiyo ahlelwe ngomephu futhi ahlukaniswe ngawo Igalari yeNdaba Yami Yebhizinisi futhi kunengxenye ekhethekile yokusiza amabhizinisi amancane ngokukhangisa kwawo online.
Tags: American ukuvezaAmexividiyo ye-googleGoogle +Ibhizinisi elincaneukukhangisa kwevidiyoividiyo ye-youtube
I-Marketing Genius kaJim Irsay